ချီလီနိုင်ငံက အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစ၍ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားသော နိုင်ငံခြားသားများအား ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည် - Xinhua News Agency
ဆန်တီရာဂို၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ချီလီနိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားသော နိုင်ငံခြားသားများအား ကပ်ရောဂါဖြေလျှော့မှုအဖြစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစတင်၍ နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရက စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။“နေထိုင်ခွင့်ရရှိသူဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအားလုံးအနေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို တာဝန်သိသိဖြင့် အပြည့်အဝလိုက်နာကြဖို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်” ဟု ချီလီနိုင်ငံ မှုခင်းကာကွယ်ရေး လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး Maria Jose Gomez က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ချီလီနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လိုသူ နေထိုင်ခွင့်ရရှိသူမဟုတ်သည့် နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးကြောင်း သက်သေ၊ နိုင်ငံအတွင်းသို့ မရောက်ရှိမီ ၇၂ နာရီကျော်ထက်နောက်မကျသော COVID-19 ရောဂါမရှိကြောင်း PCR စစ်ဆေးမှုအဖြေနှင့် ကာကွယ်ဆေးပတ်စပို့ စသည်တို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဆိုက်ရောက်ချိန် တင်းကြပ်သော ကွာရန်တင်းအစီအမံများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ချီလီအစိုးရက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် Iquique ၊ Antofagasta နှင့် ဆန်တီရာဂို စသည့်မြို့များ သို့မဟုတ် ကုန်းမြေနယ်စပ်ဖြတ်သန်းမှုများမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်များ၌သာ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရက ထုတ်ပေးထားသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခွင့်ရှိသည့် ချီလီနိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသား နေထိုင်ခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း ထွက်ခွာနိုင်ကြောင်းလည်း အစိုးရက ပြောခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်း လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး Jose Luis Uriarte ကလည်း “ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝင်ရောက်မှု” သည် ချီလီနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝင်ငွေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
SANTIAGO, Sept. 15 (Xinhua) — Chile will allow foreigners who have been fully vaccinated against COVID-19 to enter the country starting Oct. 1, as the country’s pandemic eases, the government said Wednesday.
“We call on all citizens and foreigners, whether residents or not, to behave responsibly and fully comply with the regulations in force,” Chile’s Undersecretary of Crime Prevention Maria Jose Gomez said duringapress conference.
Non-resident foreigners who wish to enter the South American country must present proof of full vaccination,anegative COVID-19 PCR test taken no more than 72 hours before arrival andavaccine passport, and comply with strict quarantine measures upon arrival, according to the government.
According to Tourism Undersecretary Jose Luis Uriarte, “incoming tourism” accounts for about 40 percent of Chile’s tourism revenue. Enditem
Photo : People walk onastreet in Santiago, Chile, June 4, 2020. (Photo by Jorge Villegas /Xinhua)